तिथि मेरो पत्रु » पहिलो डेटिङ परिचय गर्दै गरेको र don'ts गर्नुहुन्छ
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अप्रिल. 01 2020 | < 1
तिथि मेरो पत्रु एक सदस्यको रूपमा, तपाईं आफ्नो म्याच गर्न एक परिचयात्मक सन्देश पठाउन एक मौका प्राप्त. त्यसैले लजालु हुन छैन; यो आफ्नो सफल अनलाइन डेटिङ अनुभव मा एक ठूलो भूमिका खेल्न हुनेछ.
तपाईं शुरू, यहाँ पनि बलियो भर आउँदै वा पाठक cringe गर्नबाट कसरी एक केहि सुझाव हो…
को – सकारात्मक ऐन!
ज्योति भावनाका, उत्साहित सन्देश तपाईं संग हुन इच्छुक व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर अरूलाई विश्वस्त हुनेछ. के तपाईं बैठक उत्साहित छ जो पहिले देखि नै आफ्नो पूर्व बारेमा गनगन व्यक्तिलाई वा कसैले लागि जाने होला?
के छैन – एक उपन्यास लेखन
केही वाक्य सिद्ध हुनेछ, शायद यो पनि एक मजाक या दुई हान्ने? तिनीहरूले तेस्रो अनुच्छेद पुग्न अघि तर आफ्नो जीवन कहानी सहित सन्देश बन्द मानिसहरूलाई हुनेछ…
को – केही विवरण समावेश
बिर्संदै मान्छे तपाईं नै कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ जो सदस्यहरूलाई आफ्नो इनबक्स संकीर्ण हुनेछ चाहनुहुन्छ के थाहा. यस सप्ताहन्तमा Paragliding प्यार? सिद्ध, अरू कसैले पनि गर्न सक्छ!
के छैन – एक क्लिच हुनुहोस्
हो तिमी राम्ररी प्रकारको हुन सक्छ, चिन्ता, मायालु, वफादार आदि. तर हामी पहिले यो सबै सुनेको छु. पाठक तपाईंको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई अरू कसैलाई बाहिर सन्देश तपाईं चाहनुहुन्छ तुल्याउँछ केहि दिन.
अब तपाईं एक कदम अगाडी आफ्नो भविष्य साथी बैठक तिर छौं (कसरी रोमाञ्चक!), त्यसैले आफ्नो परिचय लेखन प्राप्त, केही तिथिहरु सेट र तपाईं पछि हामीलाई धन्यवाद दिन सक्छौं…अब सुरू.